တန်ဖိုးထားတတ်ကြပါစေ - For Her Myanmar
Copyright © 2017 For Her Myanmar, All rights Reserved. တန်ဖိုးထားတတ်ကြပါစေ	0
ကပ်စေးနည်း ကော်တရာများကို ချစ်သူမတော်သင့်သည့် အကြောင်းအရင်းများ
(၃)မိနစ်အတွင်း ဖန်တီးနိုင်မယ့် ခွက်လှလှလေး
ထိုက်တန်သောလစာ ရရှိရန် ညှိနှိုင်းနည်း
Letters From Heart
သို့/ ကျယ်မရဲ့ အနာဂတ်သတို့သားလောင်း
ဈေးမကြီးပေမယ့် တန်ဖိုးကြီးတဲ့ အပြုံးတစ်ပွင့်
ဆောင်းတွင်းမှာ ဒီလိုပူပူနွေးနွေး ရှူးရှူးရှဲရှဲလေးတွေ စားကြမယ်။
ရှူးရှူးရှဲရှဲ ကျောက်ပွင့်သုပ် ချဉ်ငန်စပ်လေး
​​မွေးရာပါ ​ခြေမရှိလက်​မရှိ လူသားတစ်​​ယောက်​ရဲ့ အံမခန်း အတုယူဖွယ် ​ဘဝအ​ကြောင်း
ကြေကွဲစရာ အချစ်ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်
ကျွန်တော်ရယ် သူမရယ် ဟိုကောင်ရယ်
Life Style, Motivation
တန်ဖိုးထားတတ်ကြပါစေ	2 months ago by editor
ယောက်ျားလေးတွေက ပြောတယ် မင်းတို့မိန်းမတွေက ငွေတစ်မျက်နှာသာကြည့်တတ်ကြတာပါကွာတဲ့။ ရှင်တို့ကော အဲ့လိုထင်လား။ ကျွန်မကတော့ အဲ့လိုမထင်ဘူး။
ကျွန်မတို့ မိန်းမသားတွေ တကယ်လိုချင်တာ အားကိုးယုံကြည်မှု သူ့အပေါ် ကျွန်မတို့ ဘယ်လောက် ယုံကြည်နိုင်မလဲ။ အားကိုးနိုင်မလဲဆိုတာအပေါ်ကျွန်မတို့ မိန်းမသားတွေ တိုင်းတာတတ်ကြတာပါ ။ တကယ်တော့ မိန်းမသားအများစုဟာ အချစ်ရူးမလေးတွေမှန်း သူတို့ ဘာကြောင့် မသိကြတာလဲ။
ကျွန်မတို့ တကယ်လိုချင်တာ သူတို့ဆီက မပြောင်းလဲတဲ့ ဂရုစိုက်မှုဆိုတာ သူတို့ ဘာကြောင့် နားမလည်ကြတာလဲ။ ချစ်သူက အချိန်မပေးလို့ မိန်းမသားတိုင်း မဖောက်ပြန်တတ်ကြပေမယ့် အားငယ်တတ်ကြပါတယ်။ ဝမ်းနည်းတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စာတစ်စောင် ဖုန်းတစ်ချက်ဟာ တစ်နေ့တာရဲ့ အားသစ်တွေဖြစ်စေမှန်း သူတို့ သိစေချင်တယ်။
အချစ်နိုင်ဆုံး ချစ်ပေးခဲ့ပေးမယ့် ဥပေက္ခာတရားတွေသာ ပြန်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မတို့ သူတို့ကို ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ခဲ့ချစ်ခဲ့ စွန့်ခွာသွားတတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ သူတို့ဘေးနား ရှိနေချိန်မှာ တန်ဖိုးထားတတ်ကြစေချင်တယ် ။
ပျိုမေတို့အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကြောင်းရာများကို မြန်မာဘာသာနဲ့ နေ့စဉ်ယူဆောင်လာပေးမှာပါ။
About For Her Myanmar	For Her Myanmar is online media company. Copyright ©2017, For Her Myanmar. All Rights Reserved. Site by Newmen.